नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सपना देखाइएको समृद्धि, कुशासन र भ्रष्टाचारले चिप्लिँदै देश !
सपना देखाइएको समृद्धि, कुशासन र भ्रष्टाचारले चिप्लिँदै देश !
२००७ पछिको प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल, बहुदलीय हुँदै अहिलेको लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा अनेकन् राजनीतिक परिवर्तन देशले देख्यो । सबै परिवर्तनको उद्देश्य देशको उन्नति र जनताको खुसी नै थियो । अझ साल २०६३ पछि आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुस्किलैले कुनै सरकार दुई वर्षभन्दा बढी टिकेका छन् । दशक लामो सरकारमा जाने लुछाचुँडीको राजनीतिक प्रवृत्तिपछि २०७४ फागुनमा बनेको वर्तमान नेकपाको सरकारले दुईतिहाई सिट जितेर बल्ल पाँचवर्षे पूर्णकाल टिक्ने वरदान पाएको छ । र, यही सरकारले आफ्नो प्रथम
उद्घोषमा अब राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनको काम सकिएको र सरकारको मुख्य ध्यान आर्थिक विकास र ‘समृद्धि’ मा केन्द्रित हुने बताएको थियो । तर, यो उद्घोषित ‘समृद्धि’ जनताको हातमा कति पर्छ भन्नेमा ठूला प्रश्नचिह्नहरू देखा पर्दै आएका छन् । संसारकै र दक्षिण एसियाकै गरिबमध्येको र विकास गर्न नसकेको देशमा परेको नेपालका एक चौथाइ जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । आफ्नो प्रशंसा बढाइचढाइ गर्न नचुक्ने वर्तमान सरकारले भखरै आफ्नो पहिलो वर्षको उपलब्धिको ढ्यांग्रो निकै ठोके पनि विज्ञहरूको मूल्यांकनमा यसमा लघुताभास बढी देखिएको छ । यो सरकारको पूर्ण कार्यकालमा पनि यो ‘समृद्धि’ को अनुभूति जनताले पाउने कुरा केवल मरिचिका मात्र हुने त होइन भन्ने आशंका अहिले बढ्दै गएको छ ।
यो सरकारका लागि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासन ठूला चुनौती हुन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । सडक, सिँचाइ, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा करोड नाघेर अर्बमा भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । सिक्टा सिँचाइमा ८ अर्बको भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको छ भने मेलम्ची खानेपानी लगातार अर्बौंको भ्रष्टाचारको जालोमा परेर कहिल्यै नसकिने योजना बनेको छ । भ्रष्टाचार सरकारका हरेक क्षेत्रमा र तहमा बढेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ भने ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ जस्ता संस्थाका प्रतिवेदनले पनि यही देखाउँछ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सरकारको कमजोरीले हराएका, सफा पारिएका (सफाइ पाएका) या सानो हर्जनामा ठूला भ्रष्टाचारीले माफी पाएका छन् । अदालत र अख्तियार दुरुपयोगले भ्रष्टाचार ठह-याएका घटनामा समेत सरकार लाचार भएर बस्नुलाई ‘शून्य सहनशीलता’ होइन, ‘शून्य सुशासन’ ठानिन्छ, जो अहिलेको सरकारमा देखिँदै छ । यसरी जनतामा सपना देखाइएको समृद्धि, कुशासन र भ्रष्टाचारले चिप्लिँदै देश अभाव र गरिबीमा नै रहने लक्षणहरू देखिंदै छन्, जसको रोकथाम र उपचार वर्तमान सरकार र यसका सारथिहरूले गर्नु जरुरी छ
। - कारोबार